စကားေျပာရာမွာ အသံကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္း (Be Vocal by Guy Perring) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on August 15, 2011 at 14:47 in အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ
I think you’ve doneagood job. (but nobody else does)
I think you’ve doneagood job. (but I’m not sure, give me some proof)
I think you’ve doneagood job. (but not Tim)
I think you’ve doneagood job. (even though your planning was lousy)
I think you’ve doneagood job. (OK!)
I think you’ve doneagood job. (but the plan?)
I think you’ve doneagood job. (OK?)
I think you have doneagood job. (could sound patronising)
အဓိက စကားလံုးေတြ အသံထြက္မွန္ေစဖို႕ အေလးအနက္ ျပဳရမယ့္ အပိုင္း word stress မွန္ကန္ ေစရမယ္။
အေရးႀကီးတဲ့ နာမည္၊ အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းနဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို နားေထာင္သူ နားလည္ လြယ္ေစဖို႕ အေလးအနက္ျပဳၿပီး ေျပာေပးပါ။ sentence stress လို႕ ေခၚပါတယ္။
နားေထာင္တဲ့သူ နားလည္လြယ္ေစဖို႕ မေႏွးမျမန္ ေျပာေပးပါ။ ျမန္လြန္းရင္ ေျပာတဲ့စကား အားလံုး ေခါင္းထဲ မ၀င္ဘဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ေႏွးလြန္းရင္ မထိေရာက္ေတာ့ဘဲ၊ စိတ္၀င္စား စရာ မေကာင္းေတာ့ဘဲ ျဖစ္တတ္တယ္။
အဓိပၸာယ္အလိုက္ ဆစ္ပိုင္းၿပီး အျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ ေျပာေပးပါ။ နားသင့္တဲ့ေနရာမွာ နားၿပီး ေျပာရင္ နားေထာင္တဲ့သူမွာ နားလည္ခ်ိန္ ရသြားတယ္။ ဘာဆက္ေျပာမလဲ အာ႐ံုစူးစိုက္ေစတယ္။
ေျပာခ်င္တဲ့အဓိပၸာယ္နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ အသံနိမ့္ျမင့္ ျဖစ္ေစရမယ္။ အသံနိမ့္နိမ့္ ေျပာတာ ပိုင္ႏိုင္တဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသံညီၿပီး ေလးနက္လြန္းၿပီး စိတ္အားမထက္သန္သလို ျဖစ္မသြားေအာင္ သတိျပဳရမယ္။ အသံျမင့္ရင္ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မပိုင္ႏိုင္ဘူး၊ အေလးအနက္ မ႐ွိဘူးလို႕ ထင္ျမင္မသြားေစဖို႕ သတိျပဳရမယ္။ စကားေျပာရင္း ဆီေလ်ာ္သလို ညႇိႏိႈင္းေျပာင္းလဲ ေျပာသြားတတ္ဖို႕ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုတယ္။ အေျခအေနကို နားလည္ပါ၊ နားေထာင္သူကို နားလည္ပါ၊ ၿပီးရင္ စကားသံကို လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာပါ။
စကားစုနဲ႕ ၀ါက် အဆံုးပိုင္း အသံနိမ့္ျမင့္ intonation ကိုလည္း ေျပာတဲ့စကားကို စိတ္အားထက္သန္မႈ ႐ွိေၾကာင္း၊ နားေထာင္သူမ်ားနဲ႕ နားလည္မႈ႐ွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္ဖို႕ သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲတတ္ရပါမယ္။
စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ဖို႕ စည္းခ်က္က်က် ေျပာရမယ္။ အဖိအေဖာ့၊ အျဖတ္အေတာက္၊ အသံနိမ့္ျမင့္၊ စည္းခ်က္က်မႈ ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို နားေထာင္သူ(ေတြ) ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း နားလည္ေအာင္ ေျပာေပးပါ။
အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/be-vocal မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။
အလုပ်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အဓိကအရေးပါတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခုကတော့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ အရေးကြီးကြောင်း သိရှိနားလည်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုရရှိရေး အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုတတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင်ဘာသာစကားလို့ ခေါ်တဲ့ ပထမဘာသာစကားကို စမ်းပြောတဲ့အချိန် ၂နှစ်အရွယ်လောက်မှာ စပြီး ပထမဆုံး စကားလုံးကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ စကားစမပြောခင် ၂နှစ်လုံးလုံး မိခင်ဘာသာစကားကို ကြားနေ၊ နားထောင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ဘဝမှာကတည်းက ကြားရတဲ့ စကားသံတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ထုတ်တတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်တိုင် အဲဒီအသံတွေကို ပြောတတ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ အဲဒီအသံတွေကို အလိုအလျောက် မစဉ်းစားဘဲ အချိုးတကျ ပြောနေတတ်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသံပိုင်းဆိုင်ရာ အကြားအာရုံလမ်းကြောင်းကနေ ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာတဲ့ စကားရဲ့ ၃၈% လက်ခံရရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၆၂%ကတော့ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာဆိုင်ရာ အမြင် အာရုံ လမ်းကြောင်းကနေ ရရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့ အသံပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ထက်မြက်လာအောင် လုပ်နိုင်မလား။ လွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဆိုရာမှာ ဝါကျထဲမှာပါတဲ့ ဝေါဟာရတွေထဲမှာ ဘယ်ဝေါဟာရကို အလေးအနက် ပြုသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ အရေးပါ ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဝါကျတွေကို ကြည့်ပါ။ အသံထွက် ဆိုကြည့်ပါ။ အလေးအနက်ပြုတဲ့ ဝေါဟာရ ပြောင်းသွားတာနဲ့ အဓိပ္ပာယ်မတူတော့တာကို သတိပြုပါ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို ကွင်းခတ်ပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် အခြားဘယ်သူမှ အဲသလို မထင်ဘူး။)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် သေတော့ မသေချာဘူး။ တကယ်ကောင်းကြောင်း သက်သေလေးဘာလေး ပြပါဦး။)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် တင်မ် လုပ်တာကတော့ မကောင်းရှာဘူး။)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် ဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ သုံးစားမရဘူး။)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (အိုကေပါတယ်။)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် အစီအစဉ်ကော ရှိရဲ့လား၊ ဘယ်မလဲ။)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဟုတ်ပြီလား။)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (အထက်စီးက ပြောတဲ့ လေသံ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။)
စကားသံနဲ့ အကြားအာရုံး လမ်းကြောင်းကို အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုပြောဆိုနိုင်ဖို့အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
အဓိက စကားလုံးတွေ အသံထွက်မှန်စေဖို့ အလေးအနက် ပြုရမယ့် အပိုင်း word stress မှန်ကန် စေရမယ်။
အရေးကြီးတဲ့ နာမည်၊ အချက်အလက်၊ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို နားထောင်သူ နားလည် လွယ်စေဖို့ အလေးအနက်ပြုပြီး ပြောပေးပါ။ sentence stress လို့ ခေါ်ပါတယ်။
နားထောင်တဲ့သူ နားလည်လွယ်စေဖို့ မနှေးမမြန် ပြောပေးပါ။ မြန်လွန်းရင် ပြောတဲ့စကား အားလုံး ခေါင်းထဲ မဝင်ဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ နှေးလွန်းရင် မထိရောက်တော့ဘဲ၊ စိတ်ဝင်စား စရာ မကောင်းတော့ဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
အဓိပ္ပာယ်အလိုက် ဆစ်ပိုင်းပြီး အဖြတ်အတောက်မှန်မှန် ပြောပေးပါ။ နားသင့်တဲ့နေရာမှာ နားပြီး ပြောရင် နားထောင်တဲ့သူမှာ နားလည်ချိန် ရသွားတယ်။ ဘာဆက်ပြောမလဲ အာရုံစူးစိုက်စေတယ်။
ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အသံနိမ့်မြင့် ဖြစ်စေရမယ်။ အသံနိမ့်နိမ့် ပြောတာ ပိုင်နိုင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အသံညီပြီး လေးနက်လွန်းပြီး စိတ်အားမထက်သန်သလို ဖြစ်မသွားအောင် သတိပြုရမယ်။ အသံမြင့်ရင် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မပိုင်နိုင်ဘူး၊ အလေးအနက် မရှိဘူးလို့ ထင်မြင်မသွားစေဖို့ သတိပြုရမယ်။ စကားပြောရင်း ဆီလျော်သလို ညှိနှိုင်းပြောင်းလဲ ပြောသွားတတ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်။ အခြေအနေကို နားလည်ပါ၊ နားထောင်သူကို နားလည်ပါ၊ ပြီးရင် စကားသံကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြောပါ။
စကားစုနဲ့ ဝါကျ အဆုံးပိုင်း အသံနိမ့်မြင့် intonation ကိုလည်း ပြောတဲ့စကားကို စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိကြောင်း၊ နားထောင်သူများနဲ့ နားလည်မှုရှိကြောင်း ပြသနိုင်ဖို့ သင့်တော်သလို ပြောင်းလဲတတ်ရပါမယ်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ဖို့ စည်းချက်ကျကျ ပြောရမယ်။ အဖိအဖော့၊ အဖြတ်အတောက်၊ အသံနိမ့်မြင့်၊ စည်းချက်ကျမှု တွေကို အသုံးပြုပြီး အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို နားထောင်သူ(တွေ) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်အောင် ပြောပေးပါ။
(Guy Perring ၏ Be Vocal အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/be-vocal မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Permalink Reply by drtuntunmyint on April 24, 2013 at 9:37
Permalink Reply by myint myint kyi on December 18, 2013 at 14:09
Permalink Reply by 32nceukz5jzvz on September 6, 2011 at 17:51
Permalink Reply by May Soe Oo on October 19, 2011 at 12:55
Permalink Reply by Lay Sabai on April 24, 2013 at 9:03
Permalink Reply by Khine Zin Oo on December 21, 2013 at 11:41
Thank you so much fro your sharing.
Permalink Reply by Zaw Win Hlaing on December 24, 2013 at 10:40
Thank you very much. But I think it would be better if there is an audio file to practice with
Permalink Reply by aungnaingthu on May 21, 2015 at 14:07
Permalink Reply by Kyaw Moe Aung on August 14, 2015 at 14:01
Permalink Reply by aungnaingthu on August 17, 2015 at 16:20